Keeniyaaf wanti itti aanu maali? - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaaf wanti itti aanu maali?
Keenyaaf wanti itti aanu maali?
Akka yeroo dabre gabaasnetti hogganaan paartii mormituu Keenyaa Raayilaa Odiingaa, har'a bu'aa filannichaa gara mana murtiitti akka geessan ibsu jedhamee eegamaa ture. Filannoo torban dabree Abba Uhuruu Keenyaataan %98n mo'atan.
Haa ta'u malee, akka gaazexeessaan BBC Alaster Litihed kaa'etti, Abba Odingaan dubbii kallattiin televizhiniin taasisan irratti, dhimmicha gara mana murtiitti akka geessan osoo hin dubbatin hafaniiru.
Mormitoonni Keenyaa dhimma filannichaa gara mana murtiitti geessuuf guyyoota jaha qofa qabu.
Kun garuu dubbiin filannoo mana murtiirraa hafee jira jechuu miti. Akka Alaster jedhutti, yoo xiqqaate iyyannoon tokko Mana Murtii Waliigalaatti galmaa'eera. Kunis filannoof guyyaan tokko yogguu hafu iyyatame dha. Kan biroos akka itti fufan ni eegama.
Uhuruun filannoo waldhabsiisaa Keeniyaa irra-aanan
Dureen qindoomina mormitootaa Nasa Raayilaa Odingaa, mormii qaama filannootif qaban akka itti fufan kakatan.
Duree mormitootaa Abba Raayilaa Odiingaa
"Walitti qabamuu, mormuu… akka barbaannetti itti fufna," jedhan kallattiin NTV irratti.
Abba Odiingaan filannoo pireezadaantummaa lammataa torban dabre gaggeeffame irratti hin hirmadhu jechuun irraa hafan. Sababni isaas erga Manni Murtii Waliigalaa biyyattii filannoo jalqabaa haqanii filannoo lammataa murteessan boodas, Koomishiniin Filannoo biyyattii (IEBC) akkuma duraa jira erga jedhaniin booda.
Namoota galmaa'an keessaa %39 qofatu filate.
Waan Abba Odiingaan jedhe, Keenyaatti filannoon "akka waan ayyaana muudaa ta'aa jira''.
Kana malees "kufaatii qaamolee filannoo" keessa jiru kan qoratu, "walga'ii uummataa" nan ijaaras jedhaniiru.
Dabalataanis Abba Odiingaan filannoo torban dabre %98n kan mo'atan Pireezidaantii Keenyaa Uhuruu Keenyaattaa fi itti aanaa isaanii Wiliyaam Ruutoo qeequurraa of hin qusanne. Waan jedhan, "jara abbaa irroota lamaan kanaaf akka isaan bilisummaa fi demookraasii balleessaniif hin hayyamnuf. "
Filannoon irra deebii Keenyaa bakka lamatti qoodeera
WFPn Tigraay keessatti nyaatni of harkaa qabu Jimaata na jalaa dhuma jedhe